Asa natao hanitarana ny lalana eto an-drenivohitra izy ity raha tsiahivina izay miainga eny Ankorondrano mivoaka any amin’ny lalam-pirenena faharoa hialana amin’ny fitohanana lavareny misy eto amintsika. Eo am-panaovana ny fanitsiana ny lalana ireo orinasa mandray an-tanana izany ankehitriny. Nisy mihitsy ny asa natao tamin’ny alina nanomboka ny 04 aprily lasa teo ka efa vita hatrany amin’ny 20 % ny asa ankehitriny. Tafiditra ao anatin’izany ny fivilianana eo amin’ny tetezan’i Soamanandrariny, ny tetezan’Ampasimbe ary ny raokady atsinanana. Kendrena ho vita amin’ny fiandohan’ny taona 2021 ny asa ahitana mpiara-miasa hatrany amin’ny 600 isa. Tsiahivina fa miainga eo amin’ny rond point Marais Masay mihazo an’Andranobevava sy Amoronankona ity lalana ity, mandalo eny Soamanandrariny sy Ambohimahitsy. Ho an’ireo olona manana olana amin’ny fanamboarana ny taratasin-taniny moa ka voakasiky ny tetikasa dia fantatra fa hanampy azy ireo amin’ny fikarakarana ny fitondram-panjakana. Hahazo fotodrafitrasa toy ny rano fisotro madio… ihany koa ireo fokontany 12 isa lalovan’ity lalam-baovao ity.